Manaiky an’ Kristy ho Mpamonjy azy ilay jiolahy efa ho faty
Ary hoy izy "Jesôsy ô, tsarovy aho, rehefa avy amin'ny fanjakanao Ianao " Lio. 23:42
Hatramin'ny andro farany niasany dia mpamela heloka i Kristy. Tao amin'ny haizi-mikitroky ny mamatonalina, rehefa teo an-dalam-pilentehana tsy ho hita intsony Ilay Kintan'i Betlehema, no indro namirapiratra niavaka tao anatin'ny fahamaizinana ara-pitondran-tena ny finoan'ity mpanota efa ho faty, namikitra tamin'ilay Mpamonjy efa miala aina.
Ny finoana toy izany dia azo oharina amin'ilay mpiasa tonga tamin'ny ora fahiraika ambin'ny folo, izay nandray karama mitovy amin'ny an'ireo mpiasa efa niasa nandritra ny ora maro. Tamin'ny finoana sy fibebahana ary fo torotoro no nanaovan'ilay jiolahy fangatahana. Nangataka tamin-kafanam-po izy, toa nahatsapa lalina fa afaka mamonjy azy i Jesôsy raha sitrany izany. Nifangaro tebiteby ny fanantenana tao amin'ny feony noho ny fahatsapany fa raha tsy hanaiky Izy, dia ho very ny tenany, ho very mandrakizay. Niantoraka teo amin'i Jesôsy ny fanahiny sy ny vatany efa ho faty. - Ms, t. 52, 1897.
Reny i Pilato nanao hoe: "Tsy hitako izay helony". Nomarihiny izao fihetsiny toa tahaka ny an'Andriamanitra, sy izatoo famelany heloka feno fangorahana an'ireo mpampijaly Azy (...) Reny fa betsaka no niaro an'i Kristy tamin'ireo mpandalo. Reny izy ireo mamerimberina ny teniny sy milaza ny asany. Niverina tao aminy indray ny finoany fa io no Kristy (...) Voaheloka noho ny fahotany izy, very fanantenana sy kivy ilay jiolahy, nefa izao dia misy eritreritra hafa mamy indrindra mitsimoka. Notadidiny izay rehetra reny ny amin'i Jesosy (...) Reny ireo teny nataon'izay nino an'i Jesôsy sy nanaraka Azy tamin-dranomaso (...) Nanazava ny sainy ny Fanahy Masina ary nifanatona tsikelikely hifampitohy ireo mason'ny rojo nahafantarany ny marina. Teo amin'i Jesosy voatorotoro natao fihomehezana, sy mihantona eo amin'ny hazo fijaliana, dia hitany ny Zanak'ondrin'Andriamanitra, izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Tamin'ny feo feno fanantenana sy tebiteby no niantorahan'ity fanahy tsy manan-kery sy efa ho faty ity teo amin'ny Mpamonjy miala aina (...) Avy hatrany dia tonga ny valiny. Malefaka, mamelovelo, feno fitiavana sy fangorahana ary hay ny teny nanao hoe: "Lazaiko aminao marina tokoa anio, hihaona amiko any Paradisa hianao" (...) Tonga tao amin'ilay jiolahy mibebaka ny fiadanana tanteraka avy amin'ny fanekana an'Andriamanitra IFM, tt. 807,808,809.